Hab dayn cusub dalka lagu galinayo | allsanaag
Hab dayn cusub dalka lagu galinayo
Daynta Soomaliya iyo Bridge Financing- waa hab dayn cusub dalka lagu galinayo. BY: Faisal Roble
Wasiir Bayle iyo R/W Xassan Khyre waxa Soomaalida u dheegeen in dayntii Soomaaliya lagu lahaa oo dhanayd $5 billion ($5,000,000,000) in laga cafiyey ama gidi ahaanba laga cafin doono. $1 billion oo danyta ah waxaa ku leh Mareykanka oo isuagu gidi ahaanba aan ogolayn in daynta laga dhaafo Soomaaliya.
Deyn-dhaafku run miyaa? Khuburada ku takhasusta accounting and financing, ama khaqalaha qaybta lacagaha iyo Banakiyadu waxay leeyihii dayn laga dhaafay Soomaliya oo dhan $5 billion ma jirto arintaasina waa Ilameerayso.
Fartag Consultant oo ah xirfadyaqaan xaga lacagaha ah xilal badana ka soo qabtay Soomaaliya ayaa arinta dayn cafinta buriyey. Hadeer waxa laga hadlayaa “Bridge Finance” oo ah inta Daynta la bixinayo in soomaaliya laga sii bixiyo khrashka hadeer laga rabo. Bridge financing waa sidatan: Bridge financing is for an entity to take out a short-term, high-interest loan, known as a bridge loan. Companies who seek bridge financing through a bridge loan need to be careful, however, because the interest rates are sometimes so high that it can cause further financial struggles.”
AfSomali: “Bridge finance waa dayn la qaato oo xili dhow lagu bixnayo laakiin ribadada (interest) la saaroyo aad u sareyso. Maadaama ribada qaan bixiyayaashu saartaani aad u badantahay, waxa ka dhasha tacadi dhaqaale oon si hawlyar looga bixi Karin.”
Dawlada R/W Khayre iyo Wasiir Bayle umaada Soomaaliyeed waxa jira ha u sheegeen. Waxyaabaha Soomaaliya dumiyey wax ka mid ahaa 1980hii dayntii ay Bankiga Aduunka iyo IMF siiyeen Soomaaliya oo ribadoodu aay u banaayeen. Waa xiligaa la hirgalinaayey “IMF Restructuring Program.”
Hadeerna Soomaaliya waxa lagu wadaa barnaamid kaasi la mid ah oo financial restricting ah si daymaha lagu laayahay laga heli karo. Khayrad ayaa damiin noqon doona. Dawlada laga rabaa in arimanhan si waaqici ah umada Soomaaliyeed logu qeexo
← Soomaali “Reerkayaga ayaa ugu saamayn badan” Puntland oo booqanaysa Cayn iyo Sool →